Akhriso: Warmurtiyeed laga soo saaray heshiis ay wada saxiixdeen Dowladah Soomaaliya iyo Jabuuti - BAARGAAL.NET
Akhriso: Warmurtiyeed laga soo saaray heshiis ay wada saxiixdeen Dowladah Soomaaliya iyo Jabuuti
✔ Admin on August 18, 2017 0 Comment
Wasiirrada Boostada iyo Isgaarsiinta ee dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti, Mudane Eng. Cabdi Cashur Xasan iyo Mudane Cabdi Youssouf Sougueh, ayaa si wada-jir ah u soo saaray war-murtiyeed ku saabsan waxyaabihii ay isku afgarteen labada dhinac.
Ujeeddada booqashada rasmiga ah ee wasiirka iyo wafdigiisa, oo afar cisho qaadatay, ayaa ahayd sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal, gaar ahaan iskaashiga dhinacyada isgaarsiinta iyo boostada.
Qodobada ay labada dhinac isla saxiixdeen waxaa ugu waaweyn:
1. Waxa ay labada dal iska kaashan doonaan dhinaca horumarinta xargaha fiber optic ah madaama ay saldhigyo badan ku yaallaan dalka Jabuuti, iyada oo la billaabi doono xiriirrada labada dal iyo shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya iyo Djibouti Telcom oo ku saabsan xarig cusub oo Fibre Optic ah, gaar ahaan xarigga Djibouti African Regional Express (DARE), oo isku xiri doona magaalooyinka Jabuuti iyo Mombasa, isagoo sii maraya dhowr deked oo ku yaalla Soomaaliya.
2. Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti, gaar ahaan labada wasaaradood, ayaa waxa ay iska kaashan doonaan horumarinta iyo maamulka Isgaarsiinta iyo Tiknolojiyadda labada dal, wadaagista khibradaha iyo aqoonta la xiriirta isgaarsiinta, gaar ahaan dhinacyada isku-xirka gobolka Geeska Afrika, amniga internetka (cyber security), sharciyada isgaarsiinta, maamulka hirarka iyo lambarrada, iwm.
3. In la qabto dhowaan shir ay ka soo qeybgalayaan madaxda labada dal, shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya iyo Shirkadda Djibouti Telecom.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyada Soomaaliya, Mudane Eng. Cabdi Cashuur Xasan, ayaa sheegay ka dib go’itaankii ugu dambeeyey ee Internetka Soomaaliya in wasaaraddu ay garowsatay in la dardar-geliyo helitaanka khad kale, maadaama aysan suurtogal ahayn in qaran dhan ku tiirsanaado hal xarig.
“Jabuuti waa dal aan wax badan ka faa’iideysan karno. Wuxuu leeyahay illaa 8 xarig oo fiber optic ah. Sidaasi darteed ayaan dooneynaa inaan ka kaashano sidii aan u horumarin lahayn isgaarsiinta iyo internetka Soomaaliya,” ayuu yiri wasiir Cashuur oo ka hadlayay heshiiska.